Moat: Edza Kutarisisa kweVatengi Pakati Penzira, Midziyo, uye Mapuratifomu | Martech Zone
Moat naOracle ndeye yakazara analytics uye yekuyera chikuva icho chinopa suite yemhinduro pane kwese ver verse, kutarisisa analytics, kuyambuka-chikuva kusvika uye kuwanda, ROI mhedzisiro, uye kushambadzira uye kushambadzira njere. Yadzo yekuyera suite inosanganisira mhinduro dzekushambadzira kushambadza, kutarisisa, chengetedzo chengetedzo, kushambadzira kugona, uye kuyambuka-chikuva kusvika uye kuwanda.
Kushanda nevashambadziri, zvigadzirwa, vamiririri, uye mapuratifomu, Moat inobatsira kusvika kune vangangove vatengi, kutora vatengi, uye kuyera mhedzisiro kuvhura mukana webhizinesi. Moat neOracle Data Cloud inokupa simba kuti ufambe kune zviri nani bhizinesi mhedzisiro
Ona maonero akabatana enhau midhiya
Sarudza kushanda kwemushandirapamwe wako
Nzwisisa izvo midhiya inotyaira zvakanyanya kubatanidzwa
Tsvaga iyo yekugadzira iyo inotora kutarisisa kwevaoni
Dzidza kuti ndeapi mafomati anoshanda zvakanyanya kune rako bhizinesi, uchishandisa indasitiri mabhenji
Sarudza kana iwe uri kusvika kune chaipo vateereri pane chaiyo frequency
Moat Solutions Kuongorora
Imwe yedambudziko hombe mukushambadza ndeyekutaridza marara, kubva kushambadziro kunounzwa kune vasingaite-vateereri kana kushambadza kunorova vateereri vamwe kakawanda.
Moat Analytics inotyaira zvirinani bhizinesi mhedzisiro kuburikidza neyakajeka ongororo uye yekuyera kuyera iyo inosimbisa yako dijitari midhiya zano.
Moat Reach inosanganisa vateereri-chikamu chinosvika uye kuwanda kuti uwane muchinjikwa-chikuva kuona kwekuti ndiani wauri kusvika nezvako ads uye kupi.
Mugumo weMoats inopa chaiyo-nguva kuona mukushambadzira kushanda kuti ugone kuita nekuchenjera, ruzivo ruzivo nezve yako kushambadzira shandisa.
Moat Pro chishandiso chehungwaru chishandiso chinopa kutarisa mukati mukati mechakananga uye chirongwa kushambadza kunotenga kubva kumakambani. Uine ruzivo rwekudzokera kumashure makore matatu kune izvo zviripo-mumusika, unogona kutsvaga, kuenzanisa, uye kuteedzera macampaign nekufamba kwenguva kuti unzwisise kuti zano rako rinomira sei kune vako vanokwikwidza '.
Muna 2017, Oracle yakawedzera Moat kune yayo ine simba suite yekushambadzira tekinoroji mhinduro. Oracle inopa data uye tekinoroji kuti unzwisise uye usvike kune vateereri vako zvirinani, kudzamisa kubatanidzwa kwako, uye kuyera zvese neMoat.
Tora Moat Demo
Nezve Oracle Kushambadzira
Oracle Kushambadzira kunobatsira vashambadziri kushandisa dhata kutora mutengi kutarisisa uye kutyaira mhedzisiro. Inoshandiswa ne199 yeAdAge's mazana maviri evashambadziri, yedu Vateereri, Context uye Measurement mhinduro dzinotambanudza pamusoro pepamusoro nhepfenyuro mapuratifomu uye yepasi rose tsoka yedzinopfuura nyika zana. Isu tinopa vashambadzi iyo data uye zvishandiso zvinodiwa kune ese nhanho yerwendo rwekushambadzira, kubva kune vateereri kuronga kusvika pre-bid bhiza chengetedzo, kukosha kwemamiriro ezvinhu, kutaridzika kwekutarisa, kuchengetedzwa kwekubiridzira, uye kuyerwa kweRI. Oracle Kushambadzira inosanganisa inotungamira matekinoroji uye tarenda kubva kuOracle kuwanikwa kweAd AddThis, BlueKai, Crosswise, Datalogix, Grapeshot, uye Moat.
Oracle inopa masutu ezvikumbiro zvakabatanidzwa pamwe nechengetedzeka, zvivakwa zvekuchengetedza muOracle Cloud.
Tags: ruzivo rwekushambadzirashambadza shandisakushambadza shandisa ongororokuongorora kweAdadtechbrand chengetedzomuchinjika-chikuva analyticsmuchinjikwa-chikuva frequencymuchinjiko-chikuva kusvikaEnterpriseEnterprise ad analyticskuyera kushambadza shandisamoatmoat analyticsmoat zvabudamoat promoat kusvikaomnichannelpangatauraOracle data gorekushambadzira kweterevhizheni
Typeform: Chinja Dhata Kuunganidzwa Kuita Chiitiko cheMunhu